Granite Muti ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါးသွားထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက်အသုံးပြုတဲ့သတ္တုအမှုန့်တစ်မျိုးစီကို FCZ925 လက်ကားရောင်းချမှု။ | SinoDiam
၁။ Pre-alloyed Powder ဆိုတာဘာလဲ
pre-alloyed မှုန့်များသည်ပိုမိုခက်ခဲသည်၊ ဖိသိပ်။ မရသည့်အပြင်မြင့်မားသောသိပ်သည်းသော compacts များကိုထုတ်လုပ်ရန်ပိုမိုမြင့်မားသောဖိအားပေးသည့်ဝန်များလိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ရောနှောထားသောပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒြပ်စင်အမှုန့်များမှတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုသည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ကြာရှည်ခံသောအချိန်တို့ကိုလိုအပ်သောအခါကြိုတင်သတ္တုစပ်ခြင်းကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ အကောင်းဆုံးဥပမာများမှာသံမဏိများဖြစ်ပြီးအမှုန့်သတ္တုဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုခွင့်ပြုရန်ခရိုမီယမ်နှင့်နီကယ်ပါဝင်မှုကိုကြိုတင်ရောစပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
FCZ925 ၏ 2. Parameters
အဓိက Element ကို Fe, Cu, Zn
သီအိုရီ Density 8.01g / cm³
အပူချိန်အပူချိန် 830 ℃
3. FCZ925 Pre-alloyed Powder Character
ဒီ FCZ925 သံမဏိအမှုန့်များသည်စိန်နှင့်စိုစွတ်ခြင်း၊ အမြောက်အများသိပ်သည်းဆနည်းခြင်း၊ အအေးခံလွယ်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောစူးရှခြင်းတို့အတွက်ကောင်းမွန်သောစိုစွတ်မှုနှင့်ထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိသည်။
အလယ်အလတ်အချင်းအရွယ်အစားအသုံးပြုသည့် granite saw blade, granite muti ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါးများ၊ graite blade အတွက် segments များ။
4. Granit Muti ဖြတ်တောက်ခြင်း Blade ကိုများအတွက်အသုံးပြုမှုညွှန်ကြားချက်
+ 10-20% Cu
+ 1-3% Sn
+ 5-10% Zn
35/40 @ 30%
40/45 @ 50%
45/50 @ 20%
၃၀-၃၅% @ စိန်အာရုံစူးစိုက်မှု
C. အပူချိန် 790-810 inter အပူ
နောက်တစ်ခု: SND-M10 Synthetic Micron စိန်အမှုန့်အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆေးကြောခြင်း
MBD8 ကွက်အရွယ် 80 / 100-325 / 400 သတ္တုကိုယ်ထည်အချင်း ...
MBD6 Mri အရွယ်အစားဒြပ်ထည်အမှုန့်သည် Gri ...
CerNS အတွက် FCNS06 Fe Cu Ni Sn Pre Alloyed Powder ...
Polycrystalline Diamond Compact PDC Cutter အတွက် ...
SND830 အထွေထွေ Pur များအတွက်ဒြပ်စိန်မှုန့် ...